Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ nke Cameroon Rigobert Song Childhood Story Plus Ihe Na-emeghe Ihe Echiche
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; "Nnukwu Chief". Anyị Rigobert Song Childhood Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe omume site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ezinụlọ ya, ọnwụ ọnwụ na ọtụtụ ihe ndị gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ịchịisi ya na nchekwa nke otu ndị otu egwuregwu Cameron. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole maara banyere Rigobert Song's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Rigobert Song Childhood - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Rigobert Song Bahanag na ụbọchị 1 nke July 1976 na Nkenglicock, obodo dị na ndịda Cameroon ebe izu efu na-agwụ mgbe enwere bọọlụ na ụkwụ ọ bụla.
A mụrụ ya nne ya, Bernadette Song na nna nna ya, Paul Song. Nna Song, Paul Song, nwụrụ mgbe ọ bụ nwata. Dị ka nke a, ọ maghị nna ya n'ezie mana agbanyeghị nyefee ya ọganiihu ya niile. Obi abụọ adịghị ya, enweghị nna ya na ndụ ya bụ ihe mkpali siri ike nye ya.
Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, a na-ewere Song dị ka onye nwa akwukwo, onye na-ewere ọrụ na-elekọta ndị ọ bụla n'egwuregwu football na obodo ya. N'oge ahụ, ọ nwere mkpebi siri ike ka ọ na-egwuri egwu maka klọb dị na mpaghara na ndị na-eme egwuregwu karịa afọ ndụ ya.
Ezigbo oge ruru Rigobert Song, ụbọchị nrọ ya mezuru. Nweta nke onye French French na-akpọ maka French club callup (Metz) bụ oge Rigobert ghọtara na ọ ga-abụ ọgaranya. N'oge a na-akpọ oku, ebumnuche Song igwu egwu maka otu ndị otu ya apụtaghị na ọ bụ echiche efu.
Abụ banyere ịbịaru French malitere ọrụ ọrụ ya na Metz. O mere otutu ihe siri ike nke mere ka o were ya Ọdụm ndị na-adịghị mma maka World Cup na 1994 ebe ọ ghọrọ a onye njide ihe ndekọ ụwa (onye na - eto eto nke kacha nta iji nweta kaadị uhie na akụkọ ntolite nke asọmpi World Cup).
Rigobert Song na Gabrielle Esther Nnomo Mballa - Akụkọ Storyhụnanya:
Obi abụọ adịghị ya, Rigobert bụ akara ngosi dịka ntụrụndụ Afrika. Ike ya na ike ya, karịsịa ụzọ ndụ ya si na pitch na-ewuli elu zuru ezu banyere ya. Eziokwu bụ; Rigobert bu nwoke zuru oke. Ịhụnanya nke ndụ ya, Gabrielle Esther Nnomo Mballa anọwo na Song nke oma site n'egwuri egwu ya.
Abụọ na Esther nwere ụmụ anọ (ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwanyị abụọ). Aha umuaka ha bu; Ronny, Bryan, Yohanna Bernadette na Hillary Veronique Liliane. Rigobert Song kwadoro na ezinụlọ ya (nwunye na ụmụaka) nọrọ na Liverpool mgbe ọ kwagara mba ndị ọzọ iji gbaa bọlbụ ya.
Rigobert Song Dị Nso-Ọnwụ Akụkọ:
Ihe a niile mere n'ụbọchị dị egwu, 3 nke ọnwa Ọktoba 2016 mgbe ndị dọkịta Cameroon na ndị France gbalịsiri ike ruo ọtụtụ ụbọchị iji zọpụta ndụ Rigobert Song bụ onye tara ahụhụ ọgụ ụbụrụ nke bịara site na ọrịa strok.
Onye bụbu onye Cameroon Rigobert Song nwere ọrịa strok n'ụlọ ya na Yaounde nke hụrụ ya ka ọ dara n'ụra. Dị ka akụkọ si kwuo, ọ bụrụ na ọ bụghị maka nkịta ya ọ ga-anwụ. Agbanyeghị, a na-akọsa ya na soshal midia na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ akụkọ na ọ nwụọla.
Rigobert, mgbe enyere ya ajụjụ ọnụ mgbe ọ gbakechara nyere akụkọ banyere ihe mere n'ezie. N'okwu ya…
“Ahapụrụ m ọnụ ụzọ ahụ maka na m na-eche onye ọbịa, ọ bụrụ na m hapụ ya mechie, m ga-anwụ. Amaghị m ihe na-eme m. Aka m dị ọcha. Amaghịdị m na m na-alụ ọgụ maka ndụ na ọnwụ. Ka II dara daa na enweghi enyemaka, ahụrụ m nkịta m bidoro tiwe mkpu nke mere ka onye nwe ụlọ m kpọrọ ụgbọ ala.
Ọ bụ n'ezie ọrụ ebube !!. Mgbe m tetara n'ụra, atụpụrụ m naanị kilogram 60, ọ bụ ihe ịtụnanya nye nwoke dị ukwuu ka m, ”
N'okpuru ebe a bụ Rigobert Oge awa mgbe ọ tetachara ụbọchị abụọ coma.
Mgbe ọ nọ na coma, onye ọkpụkpọ Liverpool mbụ kwuru na ya kwenyesiri ike na ọ hụrụ nna ya nwụrụ anwụ. N'okwu ya…
“Ọchịchịrị ahụ malitere, mgbe m nọ na mberede, ahụrụ m nna m nke nwụrụ mgbe Anọ m obere ihe icheta. Mgbe ọ hụrụ m, ọ sịrị; Rigobert !!, Kedu ihe ị na-eme n'ebe ahụ? Bịa !!! Ọ gwara m. Ọ bụ n'ezie ọnọdụ siri ike.
Obi dị m ụtọ ugbu a, m na-ebi ugbu a, ọ bụghị n'oge gara aga. Ihe dị mkpa bụ na enwere m ezigbo ahụike, adị m mma, ”
Okwu ndị ahụ bụ Rigobert gwara BBC Football World. Rigobert kwenyere na ọ bụ ndị agbụrụ ya, ndị ezinụlọ ya / ndị ikwu ya na ọkachasị, Onye isi ala obodo ya, Paul Biya bụ onye kwụrụ $ 78,000 maka ụgwọ ahụike ya nke zọpụtara ya. Obi dịkwa ya ụtọ maka okwu ọma Liverpool na twitter dị ka a hụrụ n'okpuru.
Ọ gara n'ihu kwuru…
“Fans niile ọkachasị ndị ezi na ụlọ m etinyela Chukwu na nsogbu. Ha niile maara etu ọnọdụ m si jọ njọ ma bido ikpe ekpere. Onye ọ bụla n’ime ndị ezi-na-ụlọ m na-ekpe ekpere, na-arịọ 'Chineke biko emela nke ahụ, ewerela Rigobert'. Ana m asị unu daalụ onye ọ bụla maka ime ka m lọta. ”
Ndụ Rigobert Family Life:
Echiche nke nna ya, Paul Song mgbe ọ dị obere ma ghara inwe foto ya na ncheta na-ewetara Rigobert Song ihe mgbu na-enweghị atụ. Mgbe ọ na-etolite, nne ya, Bernadette Song nwetara enyemaka nke ndị ikwu ya.
Ejikọtakwara ya bụ nwanne ya nwoke bụ nna nke onye ọkpụkpọ bọọlụ Arsenal na Cameroon na-agbachitere etiti, Alexandre Dimitri Song Billong, AKA Alex Song.
Alex Song na-ekele nwanne nna ya ruo mgbe ebighị ebi Rigobert Song onye dị ka nna nke abụọ na mmetụta dị ukwuu na ya na-ahọrọ football dị ka ọrụ. N'okpuru bụ Alex na ezinụlọ ya.
Rigobert Song Red Card Eziokwu:
E wezụga na Zidine Zidane, Rigobert Song bụ naanị onye ọkpụkpọ egwu ezigarala na iko abụọ dị iche iche nke ụwa, otu megide Brazil na 1994 na onye ọzọ megide Chile na 1998. Ọ na-edetakwa ndekọ ahụ dịka onye ọkpụkpọ kachasị nta mgbe a ga-ezigara ya na World Cup, bụ 17.
Site n'akụkụ ọzọ, Rigobert Song kwuru na ọ bụ naanị onye ọkpụkpọ egwu ga-egwu na 1994 na 2010 FIFA World Cup tournaments. Ejiri ya na 1994, 1998, 2002 na 2010 FIFA World Cup tournaments.
N'ikpeazụ, otu eziokwu na-awụ akpata oyi n'ahụ ekpughelarị afọ 24 na 42 ụbọchị ọdịiche dị n'etiti n'etiti Roger Milla (afọ 42 na 35 ụbọchị) Foto dị n'elu na 17 afọ Rigobert Song (afọ 17 na ụbọchị 358) n'oge 1994 ụwa cup. Oge ọdịiche nke a ka dị n'etiti ndị otu egwuregwu abụọ na akụkọ ntolite ụwa.
Ọ dị mkpa iji rịba ama na ọ dịghị onye na-egbu mmadụ Roger Milla dugara Indomitable Lions na World Cup nkeji iri na ise n'afọ 1900.
Ejila m tụnyere Rio Ferdinand:
Mgbe Rigobert Song dere maka West Ham United maka £ 2.5 nde n'afọ 2000, Ụlọ ọrụ ahụ mara ya dị ka onye ga-enwe ike ịgbanwe ya. Rio Ferdinand, onye zigara Leeds United. Eziokwu a kpasuru onye agbachitere Ex-Cameronian iwe.
Onye Rigobert Song malitere kwuru BBC as “Enweghị obi ụtọ”. N'ụbọchị mbụ ya, Song kwusiri ike na ọ chọghị ka e jiri ya tụnyere Ferdinand, ebe ọ bụ na ọ kwenyere na ọ bụ mkparị na nkà ya.
Ndụ Rigobert Ndụ Nke Onwe:
Rigobert dị omimi na mmetụta. Ọ na-enwe obi ọmịiko, na-echebara echiche, ma na-echebara ihe gbasara ezinụlọ na ụlọ ya echiche nke ọma. Rigobert nwere ọmịiko ma nwee mmasị n'ebe ndị ọ nọ nso. Ọ bụ onye ga-enwe ọmịiko na nhụjuanya na nhụjuanya nke ndị ọzọ. Dabere na atụmatụ a dị n'elu, anyị na-enye gị ugbu a nchịkọta àgwà ya.
Ike: Ọ bụ Tenacious, nke nwere uche, nke mmetụta uche, nke nwere ọmịiko na nke na-akpali nnọọ mmasị.
Ajọ: O nwere ike ịbụ onye ihere, onye na-enweghị nchekwube, onye na-enyo enyo na onye aghụghọ.
Ihe Rigobert Song nwere mmasị: Art, ihe omume ntụrụndụ (ụdị ụlọ), izu ike n'akụkụ ma ọ bụ na mmiri, na-enyere ndị ezinụlọ ya / ndị ikwu ya aka ma soro ndị enyi na-eri ezigbo nri.
Ihe ndị Rigobert achọghị: Ndị mba ọzọ, nkatọ ọ bụla banyere mama ya bụ mama, na-ekpughe ihe ndị gbasara onwe ya na nwunye ya na enyi nwanyị (s) wdg.
Rigobert Song Nchịkwa Enyemaka;
Ná ngwụcha 2015, a kọọrọ Song na ọ ga-abụ onye nchịkwa nke ndị mba Chad ma otu nkwekọrịta adịghị edozi maka ihe amaghị ya. Na February 2016, a họpụtara Song dị ka onye njikwa nke Cameroon “A” otu mba.
The "Na" otu bu otu ndi otu ndi otu egwuregwu nke di na Cameroon. Dị ka ọ dị n'April 2018, Rigobert ghọrọ otu n'ime ndị na-achọ 77 maka ọrụ ọrụ otu mba Cameroon.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Rigobert Song Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.